Taariikhda Guud ee Afrikada (mugga 1) - Afrikhepri Fondation
sabtiga, Julaay 24, 2021
Welcome BUUGSIGA SI AAD
Taariikhda Guud ee Diyaaradaha Afrika 1
Taariikhda Guud ee Afrika (Volume 1)
1 daqiiqo akhri
Lmugga 1aad ee UNESCO General History of Africa wuxuu ka hadlayaa taariikhda hore ee Afrika iyo habka shaqada. Qaybta koowaad ee muggu waxay baareysaa muhiimadda ay bulshooyinka Afrika ku leeyihiin waayihoodii hore, iyo koritaanka iyo isbeddelka taariikh-qoraaleedka Afrika, wuxuuna si guud uga hadlayaa ilaha iyo farsamooyinka. Waxaa ku xiga sharraxaad ku saabsan ilaha aasaasiga ah ee suugaanta iyo dhaqanka afka iyo nolosha, iyo sidoo kale qadiimiga ah ee Afrika iyo qaababkeeda. Cutubyada 10 illaa 12 waxay ka hadlayaan dhinacyada luqadda iyo dhaqdhaqaaqa socdaalka. Markaa ka dib waxaa imanaya laba cutub oo loogu talagalay juqraafiga taariikhiga ah iyo soo bandhigida qaab-dhismeedka taariikheed ee la qaatay.
Qeybta labaad ee mugga waxay si gaar ah uga hadlaysaa muuqaalka aadanaha iyo taariikhdii hore ee Afrika ee degaannada juquraafiyeed ee kala duwan: waqooyiga, koonfurta, bariga, galbeedka iyo bartamaha iyadoo si gaar ah isha loogu hayo dooxada Niilka. Cutubyo gooni ah ayaa loo hibeeyay farshaxanka taariikhda, farsamooyinka beeraha iyo horumarinta metallurgy.
Cutub kasta waxaa si weyn loogu sawiray khariidadaha, tirooyinka, tirooyinka iyo jaantusyada iyo xulashada sawirro madow iyo caddaan ah. Qoraalka waxaa si buuxda u sharaxay oo dhamaystiray sheeko muhiim ah iyo tusmo.
Taariikhda Guud ee Afrika, Mugga III: Afrika laga bilaabo XNUMXaad ilaa XNUMXaad qarnigii XNUMXaad
2 waxaa laga isticmaalay € 80,00
Iibso € 82,99
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julay 24, 2021 6:36
Anigu waxaan ahay Bolt - Documentary (2016)
Noqoshada - Documentary (2020)
Dabeecadda Aadanaha - Documentary (2019)
Lama oga - Documentary (2017)
Ciyaartii ugu dambeysay - Documentary (2019)